Trump iyo Hassan Rouhani oo la Kulmay Laba Arrimood oo Aanu Midkoodna Filayn; Ka Dib Dilkii General Qassem Suleimani. W/Q: Eng. Xuseen Adan Cige (Deyr) – somalilandtoday.com
Shacabka u dhashay Jam. Islaamka ah ee IRAN, maalmahanba CIIL & CADHO aan QIYAAS LAHAYN ayey dibnahooda cunayeen. Mawjado Malaayiin dad ah, oo aad moodo bad dhaqaaqday ayaa Baroor-diiq isugu soo baxay guud ahaanba daafaha dalka IRAN.
Ummadda reer IRAN waxay si aan xad lahayn uga murugoodeen Dilkii xaq-darrada ahaa ee uu Maraykanku 03/01/2020 u geystay nin ay dadkiisu u yaqaaneen Geesi iyo Mujaahid Halgamaa ah oo Shacab iyo Dawladba lagu dhaadan jiray: Major General Qassem Suleimani. Wuxuu ahaa Sarkaalkii ugu magaca iyo maamuustaba weynaa Taariikhda IRAN, wuxuu ahaa ADEEGAHA, DANJIRAHA iyo DIFAACAHA RUUXIGA AH ee Dalkiisa oo ay Dileen Cadowga koowaad ee ummadda IRAN:USA.
Malaayiintii reer IRAN ee u soo baxay Baroor-diiqdii Qassem Suleimani waxay ku dhawaqayeen dhawr erey oo isku mid ah: Ha loo Aargudo Geesiga! Ha Dhinto Maraykanku, Ha Rogmado Maraykanku! Ha Dhimato Isra’iil, Ha Baaba’do Isra’iil!
General Qassem Suleimani wuxuu ahaa nin aad u awood badan, hadalhaynta magaciisuna uu aad u fogaaday. Wuxuu in badan ka saamayn badnaa kana magac weynaa Madaxweynaha la doortay ee dalka IRAN Hassan Rouhani. Dadweynaha IRAN, in ka badan 73% ayaa humaag iyo fikir togan ka haystay raallina ka ahaa shaqsiyada iyo shaqada General Qassem Suleimani. Wuxuu si toos ah ugu xidhnaa oo uu xogta gaarka ah iyo wararkaba siin jiray Hoggaamiyaha Ruuxiga ah ee dalka IRAN Ayatollah Ali Khamenei.
Shacabka IRAN waa shacab
QAB-WEYN oo leh QIYAM ummadnimo oo ku qotoma taariikh, xadaarad iyo dhaqan soo jireen ah oo aad u fac weyn. Shacabka IRAN waa shacab aqoon ahaan iyo siyaasad ahaanba aad u bisil, waana muwaadiniin dalkooda aad u jecel. Kala-qaybsanaan kasta oo dhexdooda taalla (mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid aragti iyo afkaareed, iwm) dhinac bay iskaga leexiyaan, waxayna u midoobaan sidii ay iskaga celin lahaayeen cadowga dibada ka soo weerara.
Waxa xusid mudan in dabayaqadii Sannadkii 2019-kii ay Dalka IRAN gil-gileen Mudaharaadyo Shacab oo aad u xoog badan oo lagaga soo horjeedo Xukuumada hadda talada haysa. Rabshadahaasi waxa ku dhintay boqollaal qof, waxayna khatar galiyeen Amniga iyo Xasiloonida dalka IRAN.
M/weynaha Dalka IRAN Hassan Rouhani waxa xilligaa soo waajahay kacdoon shacab oo khatar ku ahaa sii Jiritaanka Xukuumadiisa. Dhinaca kale, ma jirin xal ama farsamo Xukuumi ah oo uu M/weyne Hassan Rouhani wax kaga qaban karayey tabashooyinka riiq dheeraaday iyo muudaharaadyada ay shacabka reer IRAN ku dalbanayeen isbedel siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo dalka si degdeg ah uga dhaca.
Haddaba, weerarkii ay Dawlada Maraykanku Jimcihii 03/01/2020 ku khaarajisey General Qasem Suleimani waxa kaga soo baxay LABA ARRIMOOD oo muhiim ah oo aan labada dhinac (IRAN iyo USA) midkoodna hore u filayn:
Dawladda IRAN oo heshay Midnimo Shacab oo ILAAHAY-KU-SII AH, taasoo noqotay Fursad aanay Xukuumad ahaan marnaba filayn inay heli karaan !!
Dhammaan ummadda reer IRAN; Shacab, Dawlad, Muxaafid, Mucaarid, Dhex-dhexaad iyo Xag-jirba waxay iska ilaaween wixii ay iyaga dhexdooda isku hayeen, Dawladooda ayay garab is taageen waxayna u midoobeen khatarta soo food-saartay Dalkooda. Waxay wacad ku mareen in aanu marnaba ka lib heli doonin cadowga Dalkooda ee noocyada badan leh.
Falkii iyo Ficilladii uu M/weyne Donald Trump is lahaa ku wiiq awooda Jamhuuriya Islaamka ah ee IRAN, dadkeedana ku kala qaybi, waxay midaysay Maankii, Maskaxdii iyo Muruqii Shacabka reer IRAN, taasoo M/weyne Trump ku noqotay FILANWAA iyo arrin aanu marnaba u fadhiyin;
Guntii iyo gaba-gabadii; Dareenka ay muujiyeen Shacabka IRAN ka dib Dilkii General Qassem Suleimani; wuxuu HALBEEG cad iyo HIRAALBA u yahay Qiimaha iyo Quwada ay leedahay Midnimada iyo Wadajirka Ummaddu. Waa dhacdo Cashar iyo ku Dayashaba ugu filan Bulsho kasta oo aan ogayn awoodooda Ummadnimo iyo Qiimaha ay leedahay Bulshada oo u midowda meelna uga soo wada jeesata wax kasta oo khatar ku ah jiritaankooda.